टी–१० लिगमा आज पनि ३ खेल, प्लेइङ ११ मा सन्दीप र पारसको सम्भावना कति? - Everest Dainik - News from Nepal
टी–१० लिगमा आज पनि ३ खेल, प्लेइङ ११ मा सन्दीप र पारसको सम्भावना कति?
काठमाडौंः यूएईमा जारी टी–१० लिगमा नेपाली क्रिकेट टिमका महत्वपूर्ण सदस्य पारस खड्का र सन्दीप लामिछानेआवद्ध टिम खेल्दै छन् ।
यी दुई खेलाडीको टिम एकअर्कासँग होइन फरक समयमा फरक टिमसँग खेल्दै छन् ।
सन्दीपआवद्ध कर्नाटक टस्कर्सले बंगला टाइगर्स र पारस सम्मिलित टिम अवुधावीले नर्थन वारियर्सको सामना गर्दैछ ।
कर्नाटक टस्कर्स र बगंला टाइगर्सबीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ७ः३० बजे र अवुधावी र नर्थन वारियर्सबीचको म्याच साँझ ५ः१५ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
सन्दीपको टिमले पहिलो खेलमा दिल्ली बुल्सविरुद्ध जित हासिल गरिसकेको छ । यता पारसआवद्ध अवुधाबीले भने कलन्दर्ससँग ‘टाई’ म्याच खेल्दै अंक बाँडेको थियो ।
आज पनि दुवै नेपाली स्टार प्लेइङ ११ मा मौका पाउने सम्भावना बलियो छ । पहिलो खेलमा दुवै खेलाडीले प्लेइङ ११ अवसर पाएका थिए । पारसले आफ्नो डेब्यू म्याचमा ३ बलमा अविजित ३ रन बनाएका थिए ।
अवुधावीले पहिलो म्याच बराबरी खेलेकाले प्लेइङ ११ मा पारसको सम्भावना बलियाे रहेका हाे ।
यता कर्नाटकले पनि सन्दीपलाई प्लेइङ ११ मा राख्न चाहन्छ । शनिबार पहिलो खेलमा दिल्लीविरुद्ध उनले पहिलो ओभरको पहिलो बलमै विकेट लिएका थिए ।
दिल्लीविरुद्ध सन्दीपले २ ओभरमा १९ रन दिँदै एक विकेट लिएका थिए । पारसको टिममा इंग्ल्याण्डका क्रिकेटर मोइन अलि र सन्दीपको कर्नाटकमा दक्षिण अफ्रिकी पूर्वक्रिकेर हासिम अमला कप्तान रहेका छन् ।
ट्याग्स: टी-१० क्रिकेट लिग, पारस खड्का, सन्दीप लामिछाने